मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस, तीन दलबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ? | Khash Khabar
गृह मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस, तीन दलबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?
मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस, तीन दलबाट को को बन्दैछन् मन्त्री ?
१३ श्रावण २०७८, बुधबार ०४:३२
काठमाडौं। नेपाली काँगे्रसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस परेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वको आफ्नै सरकारलाई ढाल्न विद्रोह गरेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सामेह हुने हल्ला चल्न थालेपछि देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा झनै सकस परेको छ।
आफ्नै पार्टीभित्रको गुट ब्यवस्थापन, नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र मन्त्रीको आकांक्षीको संख्या बढनु , जनता समाजवादी पार्टी भित्रको उपेन्द्र यादव पक्षलाई समेत मन्त्रालय भागबण्डा गर्नुपर्ने कारण प्रधानमन्त्ती देउवालाई चुनौति थपिएको देखिन्छ।
ब्यापारिक घरानाका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको चाबी सुम्पिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई पहिलो गास मै सकस भएको छ। देउवा र उनकी पत्नी आरजू देउवाले श्रेष्ठलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै आफ्नै पार्टी काँगे्रसभित्र धेरै नेताहरुले विरोध गरेका छन्।
मन्त्रि नियुक्तको विषयलाई लिएर सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। देउवाले मन्त्रि नियुक्त गर्दा गठबन्ध पार्टीविच छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो।
गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। देउवाले २९ गते नै ज्ञानेन्द्र कार्की, जनार्दन शर्मा, बालकृष्ण खाँण र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए।
कार्की कानुन, शर्मा अर्थ, खाँण गृह र भुसाल ऊर्जा मन्त्री छन्। सरकारलाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल समूह,जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुन थालेको छ। विगतमा भकाभक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भनेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गरेका कांग्रेससहितको गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा आलोचित बन्न बनेका छन्। धेरै मन्त्रालय खाली छन्।
संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। सम्भवतः यही सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले आकांक्षी धेरै भएको विश्लेषण गरिएको छ। विगतका वर्षहरूमा लाजै नमानी चार दर्जनसम्म मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन बसेपछि त्यसमा सुधार ल्याउनकै संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यसमाथि पनि देउवाले यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा ४ दर्जन मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा ४९ जनाले मन्त्री बन्न दबाव दिएपछि आफू मानसिक तनाबमा परेको बताएका थिए।
अब फेरि भागबण्डा मिलाउन सरकारले मन्त्रालय फुटाउने र संविधान संशोधन गर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
कांग्रेसमा संस्थापनबाट सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. नारायण खड्का, मीन विश्वकर्मा, डा. डिला संग्रौलासहितका नेताहरूले यसपटक मन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन्। यी चारमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवा तयार रहेको बताइएको छ।
यसपटक पूर्वसंस्थापनबाट, सुजाता कोइराला, राजन केसी, तेजुलाल चौधरी, प्रमोद यादव, प्रकाश रसाइली स्नेहीको नाम चर्चामा छ । सिटौला पक्षबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब देउवालाई छ।
गठबन्धन सरकार भएकाले देउवालाई सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्न यसपटक निक्कै सकस पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नजिकिँदो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै यसपटक मन्त्री चयनलाई प्राथमिकतामा लिएको बताइएको छ।
देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याइसकेका छन्।
त्यसै गरी, माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री छनोटको कामलाई तीव्रता दिएको छ। मन्त्री छनोट गर्न निकै दबाब परेको बताउँदै आएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशबाट एक/एक जना मन्त्री बनाउने नीति लिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशबाट जनार्दन शर्मा र वागमती प्रदेशबाट पम्फा भुसाल मन्त्री भइसकेका छन्। गण्डकी प्रदेशबाट यसपटक देवेन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा रहेको छ। माओवादीले प्रदेशबाट मात्र नभई सबै समुदाय र भूगोलको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ।
यादवले यसअघि अवसर पाइसकेकाले मोदी र मण्डलमध्ये एक जना मन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ। महिलाबाट जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठमध्येबाट मन्त्री हुने बढी सम्भावना छ। देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतको नाम चर्चामा छ।
# मन्त्रीपरिषद् बिस्तार